OpenEXPO inotiunzira webinar uye mikana yekutaura | Linux Vakapindwa muropa
ndofunga OpenEXPO Inoda mharidzo shoma, yatove bhenji uye takatsaurira akati wandei matikiti edu kuzviitiko zvakawanda. Nhasi tine zvinhu zviviri zvitsva zvauri kuda. Imwe yacho ndeye webinar iyo yavachaita (muChirungu) yegore rechitatu rakateedzana, kugovana chiono pane zvetekinoroji mumunda weyakavhurwa sosi uye yemahara software. Pakati pemaitiro aya ndeaya eInternet yezvinhu kana IoT, AI, Big Data, Kudzidza Kwemuchina, Blockchain, nevamwe vazhinji.
Kana iwe uchifarira, unogona kuwana zvese muchiitiko ichi chichaitika yechi28 Kukadzi 2019 na5: 00 PM (CET), uko pfungwa dzenyanzvi kubva kuIT, Telefónica, BBVA, Fundación Apache, nezvimwe zvichapihwa, uye ichizotaridza CEO weOpenExpo, Philippe Lardy. Unogona kuenda online kune webinar uye usarasikirwe nechero ruzivo, pamwe nekuve nemukana wekudyidzana nevanyanzvi vataurwa pamusoro apa, uchibvunza mibvunzo kana kupa maonero.
Kune rimwe divi, musi waZvita 27, iko kufona kwakavhurwa kwekutumira zvikumbiro zvekuratidzira kubva kune vamwe vanhu kufarira kuve vatauri pane inotevera vhezheni yeOpenEXPO 2019, wechitanhatu, unozoitika muna Chikumi 6, 26. Ehe saizvozvo, musoro wenyaya unofanirwa kunge uine hukama neakavhurika matekinoroji. Kana iwe uchifarira, kurumidza uye kunyoresa izvozvi, vasati varega kutambira zvikumbiro musi waMarch 2019 na 3:23 CET.
Zvirongwa zvakagamuchirwa mukati menguva yekupedzisira zvichaongororwa uye zvichaiswa kuvhota musi waKurume 17 kusarudza izvo zvicharatidzirwa. Mune ino kesi, OpenEXPO inokubata iwe uye iwe unozokwanisa kutora chikamu mune inotevera edition semutauri uye kunakirwa ne VIP kupfuura kune ino inoshamisa iratidziro ichave mune ino shanduro ine vanopfuura 250 vatauri, anopfuura makambani mazana mana aripo, uye vanopfuura zviuru mazana matatu nemazana mashanu. Uye zvakare, iwe uchagamuchira maviri akajairika ekupfuura matikiti iwe ekukoka chero waunoda. Kana iwe uchifarira, unogona kutumira yako chikumbiro mune iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » OpenEXPO inotiunzira webinar uye mikana yekuratidzira
GNOME 3.32 inogamuchira yayo yechipiri beta, iyo RC inosvika munaKurume 6